असार १९ गते बिहीबारका दिन विश्वभर भएका मुख्य १० घटनाहरु हेर्नुहोस्
१. नाइजेरियाका राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारीले अफ्रिकालाई अहिले व्यापार नीतिको मात्र नभई समग्र अफ्रिकी महादेशलाई नै उत्पादन उद्योगको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। राजधानी अबुजामा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति बुहारीले अफ्रिकी महादेशलाई गरिबी र पछौटेपनबाट माथि उकास्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेकामा जोड दिए। अफ्रिकी युनियनको शिखर सम्मेलनकै संघारमा राष्ट्रपति बुहारीले अफ्रिकाको ठूलो अर्थतन्त्र रहेको नाइजेरियाले अफ्रिकी महादेशीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने जानकारी दिए।
२. अल्जेरियाका अन्तरिम राष्ट्रपति अब्देलकादेर बेनसलाहले स्वतन्त्र व्यक्तिहरु रहेको समूहसँग सामयिक राजनीतिकको सहज निकासका सन्दर्भमा वार्ता गर्ने घोषणा गरेका छन्। उक्त वार्तामा सरकार र सेनाका पदाधिकारीहरु रहने छैनन्। राष्ट्रपति बेनसलाहले टेलिभिजन मार्फत राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सबै राजनीतिक दल र विशिष्ट व्यक्तिहरुसँग परामर्श गर्नु परेको बताए। उनले यो संवाद सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज संस्थाहरु, युनियन र गत फेब्रुअरीमा प्रदर्शनमा उत्रिएका जनसमुदायका प्रतिनिधिहरुसँग गरिने स्पष्ट पारे।
३. चीनमा आएको आँधीले बिहीबारसम्म झण्डै दश हजार जना प्रभावित भएका छन्। देशको उत्तरी लिओनिङ प्रान्तमा बुधबार आएको आँधीका कारण नौ हजार नौ सय जना प्रभावित भएको अधिकारीले जानकारी दिएका हुन्। आँधीमा परी कम्तीमा छ जनाको मृत्यु भएको र अरु १९० भन्दाबढी घाइते भएको समाचारमा जनाइएको छ।
स्थानीय कैयुना सहरमा प्रतिसेकेण्ड २३ मिटरको गतिमा स्थानीय समयअनुसार बुधबार बेलुका ५.१५ मा आँधी आएको थियो। प्रभावित क्षेत्रमा प्रहरी, अग्नि नियन्त्रक, स्वास्थ्यकर्मीलगायत विभिन्न क्षेत्रका गरी आठ सय भन्दा बढी उद्धारकर्मी खटिएका छन्।
घटनास्थलमा खोजी तथा उद्धारकार्य अहिले पनि जारी रहेको स्थानीय अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उद्धारकर्मी विभिन्न दश ओटा समूह बनाएर खटिएको र उनीहरुले घटनास्थलमा मान्छेको खोजी तथा उद्धार गर्नुका साथै घाइतेको उपचार गर्ने, विद्युत लाइन जोड्ने, सडक खुलाउनेलगायतका काम गरिरहेका छन्।
४. होन्डुरसमा भएको डुङ्गा दुर्घटनामा परी कम्तीमा २७ जनाको मृत्यु भएको छ। देशको दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने मोस्क्वीटीया क्षेत्रमा माछा मार्ने डुङ्गा बुधबार दुर्घटना भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्। उनीहरुका अनुसार घटनामा परी अरु नौ जना अझै हराइरहेका छन् र उनीहरुको खोजी कार्य जारी रहेको छ। सुरक्षा बलका प्रवक्ता जोसे मेजाले घटनास्थलबाट अरु ५५ जना भने जिवितै बाहिर निस्कन सफल भएको जानकारी दिए। डुङ्गामा ९१ जना यात्रु थिए तर डुङ्गाको क्षमता ३१ जना मात्रै बोक्ने रहेको थियो।
५. उत्तरपश्चिम पाकिस्तानमा भएको एक डुङ्गा दुर्घटनामा कम्तीमा चार जनाको मृत्यु हुनुको साथै अन्य २१ जना अझै पनि बेपत्ता रहेका छन्। भाग्यबस कसैलाई जिवीतै उद्धार गर्न सकिन्छ भन्ने आशामा उद्धारकार्य जारी राखिएको उद्धारकार्यका संलग्न अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन्। खैबर पाख्तुनख्वा प्रान्तमा रहेको इनडुस नदीमा शाङगलाबाट हारीपुरबाट गइरहेको डुङ्गा बुधबार दुर्घटना भएको थियो। यस डुङ्गामा ३८ व्यक्ति सवार रहेका र ती मध्य १३ जनाले भने पौडी खेलेर ज्यान बचाएका स्थानीय प्रहरी अधिकारी जाहिद उल्लाहले एएफपी समाचार समितिलाई जानकारी दिए।
६. भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको अध्यक्षबाट राजिनामा दिएका राहुल गान्धीले आफ्नो ट्वीटर ‘प्रोफाइल’ परिवर्तन गरेका छन्। उनले आफ्नो ‘ट्वीटर प्रोफाइल’मा यसअघि ‘भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस अध्यक्ष’ लेखेकोमा अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएपछि त्यसमा संशोधन गरी बुधबारदेखि भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको सदस्य लेखेका छन्। उनको ट्वीटर ‘अकाउन्ट’ मा ‘यो राहुल गान्धीको आधिकारिक ‘अकाउण्ट’ हो, भनी लेखिएको छ।
प्रोफाइलमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको सदस्य तथा संसद सदस्य भनेर पनि लेखिएको छ। उनले केही दिनमात्र अघि पनि आफू पार्टी अध्यक्ष अब धेरै दिन नरहने बताएका छन्। उनले चाडै नै पार्टीले नयाँ अध्यक्ष चयन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए।
७. अष्ट्रेलियामा धुमपानका कारण हुने हृदयघातले हरेक दिन १७ जनाको मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ। अष्टे«लियाली नेसनल युनिभर्सीर्टी (एएनयु) ले गरेको गहिरो अध्ययनले धुमपानसम्वन्धी डरलाग्दो तथ्य पत्ता लगाएको समाचारमा जनाइएको छ। उनीहरुका अनुसार धुमपानका कारण रक्तबाहिनी नलीसम्वन्धी समस्या तथा हृदयघातका कारण मृत्यु हुने गरेको उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदनमा देखाइएको छ।
यस विश्वविद्यालय अन्तर्गतको जनस्वास्थ्य तथा इपिडिमियोलोजी केन्द्रका एमिली ब्याङ्कस नेतृत्वको टोलीले सात वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरेको हो। अध्ययन टोलीले धुम्रपान गर्ने एक लाख
९० हजार अष्ट्रेलियालीमा अनुसन्धान गर्दा धुमपान नगर्नेको भन्दा ३६ प्रकारका फरक रोगहरु देखिएको जनाएको छ।
८. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा सैन्य सलामी दिनेछन्। उक्त अवसरमा उनी पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनका महान वाणीहरु कुदीएको एक स्तम्भ अगाडि उभिने छन्। ती वाणीहरु अमेरिकी गृहयुद्धका बेला अमेरिकी मनहरुमा लागेका विभाजनका घाउहरुमा मल्हम लगाउने उद्देश्यले राष्ट्रपति लिंकनले सिर्जेका थिए।
९. द्वन्द्वग्रस्त मुलुक सीरियाका लागि अनुबन्धित एक विशाल पेट्रोलियम ट्यांकर जिब्राल्टर सरकारले बरामद गरेको छ। सीरियाले हाल युरोपेली संघद्वारा थोपरिएको आर्थिक नाकाबन्दी बेहोर्दै आइरहेको छ।
१०. अत्यन्त घातक ताप लहरका कारण विभिन्न भारतीय राज्यहरुमा मर्नेहरुको संख्या १०० भन्दा बढी नाघेको छ। विज्ञहरुका अनुसार यो त साधारण संकेत मात्रै हो। आउँदा वर्षहरुमा मार्च महिनादेखि जुलाई महिनासम्म यस सालको भन्दा पनि धेरै तापक्रम बढ्दै जाने र मानवीय आबादीका लागि कतिपय भारतीय वस्तीहरु अयोग्य हुन जानेछन्।